iCloud ပါဝင်ပြီး ၊ အသစ်နီးပါး (99%) ရှိပါတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင်လ် + 4G ဖြစ်ပါတယ်။ Accessories နှင့် ဗူးလည်းပေးမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ဒီလင့်ခ်လေးကနေတဆင့် သွားရောက် ကြည့်ရှု ၊ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ >>> https://www.ads.com.mm/ipad-mini-16gb-white-pid247144
Model No. DSC.S2000 ဖြစ်ပြီး ၊ 10000 Battery ပါဝင်ပါတယ်။ ပုံထွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ >>> https://www.ads.com.mm/sony-camera-pid246803 ကနေတဆင့် သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Sony PSP Game Player
အမည်းရောင် Sony PSP Game Player လေးပါ။ Modified လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်သလို ၊ Charger + Player လည်းပါရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ >>> https://www.ads.com.mm/sony-psp-game-player-pid244368 ကနေတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Author ADS BLOGPosted on October 1, 2015 Categories Ads of the weekTags Ads of the Week
Previous Previous post: မြက်ခင်း အရိတ်ကောင်းပေမယ့် …. ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့
Next Next post: တိုက်ခန်းအတူတူ ဌားရမ်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ပျော်ရွှင် ၊ စိတ်ဝင်စားစရာများ